२०२१ Correos विपक्षी एजेन्डा them तिनीहरूलाई अपडेट गर्नुहोस् यहाँ! | गठन र अध्ययन
विपक्षी एजेन्डा पोष्ट गर्नुहोस्
को प्रकाशन पछि Correos को विरोधको घोषणा, यो समय अनुप्रयोगहरू पेश गर्ने समय हो। वर्षौं बर्ष, कोरिओसले प्रतिस्पर्धी परीक्षाको लागि नयाँ कल जारी गर्दैछ कर्मचारीहरूको औसत उमेर कम गर्न, त्यसैले यो सधैं राम्रो समय हो कोरेयोसको विपक्षको अध्ययन गर्न शुरू गर्नु। यदि तपाईं अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, हामी यहाँ सबै कुरा बताउँछौं।
Correos विरोधको एजेन्डा अपडेट गरियो
तल तपाईले सबै प्याकहरू भेट्टाउनुहुनेछ जुन हामीसँग अद्यावधिक गरिएको पोस्टल एजेन्डाको साथ छ ताकि तपाईले उत्तम बजार मूल्यमा बढी सजीलो अनुमोदन गर्न सक्नुहुन्छ। 95%% भन्दा बढी पास Correos को बिरूद्धमा हामीलाई समर्थन गर्दछ!
यो सस्तो विकल्प र सबै भन्दा पूर्ण छ किनकि कोरियोसबाट अपडेट गरिएको एजेन्डाको साथ दुईवटा खण्डहरू प्राप्त गर्नुका साथै तपाईं पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ:
साइकोटेक्निकल टेस्टहरू तयार गर्न पुस्तक
अभ्यास गर्न मक परीक्षा
परीक्षाको तयारीको लागि टेस्टहरू
संसाधनहरूको साथ अनलाइन वेबसाइटमा पहुँच गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई कलको लागि तपाईंको तयारी अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ।
प्रीमियम प्याक परीक्षाको लागि राम्रोसँग तयारी गर्न चाहनेहरूको लागि हो किनभने बचत प्याकमा समावेश गरिएको बाहेक, तपाईं पनि धेरै चाखलाग्दा अतिरिक्तहरूको श्रृंखला प्राप्त गर्नुहुनेछ:
शीर्षक द्वारा शब्दावली र विधायी सन्दर्भ
योजना र ग्राफिक्स सीखने को सुविधा को लागी
प्रत्येक शीर्षक र अध्ययन गाइडहरूको सारांश
वास्तविक सुविधाहरूको साथ मोक परीक्षा
परीक्षाको तयारीका लागि अध्ययन प्रविधिको साथ पाठ्यक्रमहरू
महत्वपूर्ण शीर्षकहरूको स्पष्टीकरणात्मक गोली
अन्तर्क्रियात्मक सैद्धांतिक सामग्री
अघिल्लो कलहरूको परीक्षा विश्लेषण गरियो
तपाईसँग acade महिना वा १२ महिनाका लागि एकेडेमीमा पहुँच पनि हुनेछ, तपाईले पढ्नु पर्ने समय अनुसार।
एकेडेमीको months महिनाको साथ प्रीमियम प्याक
यदि तपाईं यी प्याकहरूमा रुचि राख्नुहुन्न भने, तपाईंसँग व्यक्तिगत रूपमा आवश्यक उत्पादनहरू किन्नको पनि अवसर छ। यी उपलब्ध विकल्पहरू छन्:
केवल एजेन्डा: यो अन्तिम पोष्टमा अपडेट गरिएको सम्पूर्ण पोष्ट अफिस एजेन्डा हो।
नक्कल परिक्षण: सम्भवको सबैभन्दा सरल र प्रभावशाली तरिकामा परीक्षा अभ्यास गर्नुहोस्।
साइको टेक्निक पास गर्न पुस्तकहरू: राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्न को लागी सबै सम्भव परीक्षण गर्न छ। तिमी केको लागि पर्खिरहेका छौ?
बहु विकल्प परीक्षाको लागि तयारी: धेरै प्रश्नहरूको साथ आफूलाई यस प्रकारको परीक्षणको साथ परिचित गर्न।
२०२० पोस्ट-अप विपक्षको लागि कल
Correos 3.421 कल को लागी 2020 ठाउँ बोलाएको छ। यो भन्नु पर्दछ कि यी सबै स्थानहरूले राष्ट्रिय दायरा थप्दैछन्। त्यसो भए तपाईले जानु पर्ने हुन्छ Correos को विरोधको घोषणा र प्रत्येक प्रान्त को लागी स्थिति पत्ता लगाउनुहोस्।
एक चोटि कल खुल्ला भयो, यो परीक्षाको समीक्षा गर्न लायकको छ जुन हामीलाई पर्खिरहेको छ। बारेमा एउटा साधारण परीक्षण र दुई विशिष्ट व्यक्ति, दुबै वितरणको लागि र वर्गीकरण र ग्राहक सेवाको लागि। पहिलो, साधारण परीक्षण, questions० प्रश्नहरूको बहु विकल्प परीक्षणमा आधारित छ। ती मध्ये केवल १० साइकोटेक्निकल हुनेछन्। यो गर्नका लागि प्रत्येक विपक्षीसँग करीव 60 10 मिनेट हुन्छ। निर्दिष्ट गरिएका परीक्षा पनि बहु विकल्पहरू हुन्। तर यस अवस्थामा लगभग 55० प्रश्नहरू हुन्छन् र विपक्षीहरूलाई उपलब्ध हुने अधिकतम समय minutes 40 मिनेट हुन्छ।
यदि तपाईं पारित गर्नुभयो भने परीक्षा र नकआउट चरण, त्यसो भए तपाईको योग्यताको मूल्यांकन चरण आउँनेछ। केहि गुणहरू जुन अ the्क निम्न हुन्:
डाकघरमा वरिष्ठता। विगत7बर्षको अवधिमा पोजीशनलाई लिनको लागि।
अनुरोध गरिएको प्रान्तमा कामहरू गरेका छन्।
विशेष स्थिति र प्रान्त दुबैको रोजगार बोर्डसँग सम्बन्धित छ।
प्रशासन, व्यवस्थापन, वाणिज्यिक, मार्केटिंग र कम्प्युटर विज्ञानमा विश्वविद्यालय डिग्री वा उच्च डिग्री व्यावसायिक प्रशिक्षण।
को लागी कोर्सहरु जुन सम्बन्धित पोजिसहरु संग सम्बन्धित छ।
अनुमति A वा A1, points पोइन्टहरू। ड्राइभिंग इजाजतपत्र, केवल एक बिन्दु।
विपक्षी आवश्यकताहरू पोष्ट गर्नुहोस्
कम्तिमा १ years वर्षको हुनुहोस् र उमेर को reached 65 वर्ष पुगेको छैन।
अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र, वा स्कूल स्नातक र कुनै पनि अन्य आधिकारिक डिग्री जुन पहिलो डिग्री बदल्न सक्छ।
कुनै पनि प्रकारको काम छैन जुन हुलाक कार्यालयसँग निश्चित गरीएको छ।
हटाइएको वा सेवाबाट अलग गरिएको छैन।
आवश्यक कार्यहरू गर्न आवश्यक पर्ने शक्तिहरू छन्।
स्पेनिश नागरिकता छ, वा कम्तिमा यूरोपियन युनियनको नागरिक बन्नुहोस्। कामको कागजातहरू सँधै क्रममा राख्नुहोस्, काम पूरा गर्न।
हुलाक डेलिभरी ब्यक्ति बन्न तपाईलाई A, A1 वा B कार्ड चाहिन्छ।
Correos विपक्षमा कसरी साइन अप गर्ने
कोरियोसको विपक्षका लागि शिलालेख यसको आधिकारिक पृष्ठ मार्फत गरिनेछ। एक पटक आवेदन अवधि सकिएपछि हामी अनलाइन दर्ता गर्न सक्दछौं। दर्ता गर्नको लागि, तपाईले धेरै चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ:
तपाईं Correo.es को पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुहोस्, तब तपाईं 'कर्पोरेट जानकारी', 'मानव संसाधन', 'रोजगार' र अन्तमा 'कामबाट निश्चित व्यक्तिगत आय' मा जानुहुन्छ।
अर्को चरण भनेको 'आवेदन दर्ता' हो। यस सेक्सनमा तपाईले आईडीको साथ साथै पासवर्ड पनि राख्नुपर्नेछ, वेबले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्ने चरणहरूको अनुसरण गरेर।
तेस्रो चरण हो तपाइँको व्यक्तिगत डेटा कभर गर्नुहोस्। जहिले पनि जाँच गर्नुहोस् कि ती सबै सहि छन् र गोपनीयता नीति पढ्न नबिर्सनुहोस्।
अब तपाईले काम गर्न चाहानु भएको प्रान्त छनौट गर्नुपर्नेछ, साथै तपाईले चाहानु भएको काम पनि।
Para दर्ता समाप्त गर्नुहोस्, तपाईंले तिर्नु पर्छ दरहरु जुन १ 13 यूरो हो। हो, यो पहिले १० युरो थियो तर तिनीहरू माथि गए। भुक्तान विधि कार्ड मार्फत हो। जब भुक्तानी रुजू भयो, तपाईं एक अनुरोध परिचयकर्ता र भुक्तानी को प्रमाण प्राप्त हुनेछ।
अन्य प्रकारका कागजातहरूका साथै शिर्षकहरू तपाईंसँग छन् यस समयमा आवश्यक छैन, तर भविष्य चरणहरूमा आवश्यक हुनेछ। अवश्य पनि, कुनै परिवर्तन गर्न, तपाईले अघिल्लो अनुरोध रद्द गर्नुपर्नेछ र नयाँ भर्नु पर्छ।
हुलाक कर्मचारीको तलब
सत्य यो हो कि तलबको मुद्दा सधैं प्राय: सोधिने प्रश्नहरू मध्ये एक हो। यो भन्नु पर्छ कि अन्तिम आंकडा सधैं फरक हुन सक्छ। किनकि यो अतिरिक्त तलब, वरिष्ठता, स्थिति र खातामा लिनको लागि अन्य कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। तर अझै, हामी तपाईं लाई एक विचार दिन अनुमानित मात्रा छ:
कार्यकारी कर्मचारी: यस प्रकारको स्टाफ भित्र हामी म्यानिपुलेटर, अनुवादक, मोबाइल सेवाहरू, अपरेटर, आदि को काम भेट्टाउनेछौं। ती सबैको तलब १,1300०० देखि १1500०० युरो सम्म छ।
आधार आधिकारिक कर्मचारी: थोरै कम यस कर्मचारीको तलब छ। तर यो सत्य हो कि यो एकदम थोरै फरक हुन्छ, त्यसैले हामी १,२०० देखि १1200०० युरोको बारेमा कुरा गर्दैछौं। यो आधारभूत वा नियमित तलब हो भनिन्छ।
क्रमबद्ध र वितरण स्टाफ: जिल्लाको दुबै प्रमुख र वर्गीकरणकर्ता वा खुट्टामा वितरण दुवैको ११०० देखि १ 1100०० युरो बीचको तलब छ। जुनियर स्टाफ जस्तै।
सहायक कर्मचारी: यस अवस्थामा सहायक स्टाफको तलब १,००० र १२०० यूरो हुन्छ।
कोरियोरोस विपक्षहरूको लागि पाठ्यक्रममा १ common साझा विषयहरू छन् जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ:
थीम २०२०: साधारण र / वा दर्ता हुलाक सेवाहरू, साथै उनीहरू जुन उत्पादनलाई सन्दर्भ गर्दछ।
थीम २०२०: ई-वाणिज्य र पार्सल भाग मा केन्द्रित।
थीम २०२०: व्यवसाय मान र धेरै अन्य थपियो, साथै थप सेवाहरू।
थीम २०२०: श्रम दक्षताको विविधीकरण, हुलाक कार्यालयहरूमा कार्य गरियो।
थीम २०२०: डिजिटल व्यवस्थापन: डाटा र Correos मा प्रशासनिक।
थीम २०२०: अन्य सेवाहरू र विभिन्न उत्पादनहरू।
थीम २०२०: प्रवेश प्रक्रिया।
थीम २०२०: प्याकेजहरूको उपचार, यातायात नियमहरू।
थीम २०२०: डेलिभरी प्रोटोकल।
थीम २०२०: कर्पोरेट सामग्री (PDA को रूपमा उपकरणहरू, IRIS र धेरै अन्य आवश्यक उसको स्थितिमा कामदारको प्रदर्शनका लागि वा उसले बोक्ने कार्यहरूको लागि।
थीम २०२०: ग्राहक सेवा र उपचार: उही संग सम्बन्ध, एक गुणस्तर उपचार छ कि कसरी कम्पनी को छवि लाभ।
थीम २०२०: व्यवसाय संगठन, कम्पनीको कानूनी रूपरेखा र अनुसरण गर्न वाणिज्यिक रणनीति।
थीम २०२०: लिes्ग र कानूनी ज्ञान बीच समानताका सर्तहरू काममा लैंगिक हिंसासँग मिल्दोजुल्दो छ। मनी लान्ड्रिंग र पारदर्शिता, नैतिक प्रतिबद्धता र सुरक्षाको सर्तमा जानकारीको उपचारको रोकथाम (LOPD)।
यी सबै विषयहरू सामान्य वा सैद्धांतिक भागसँग सम्बन्धित छ। तर थप रूपमा तपाई साइको टेक्निक पनि पास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि तपाईसँग सिलेबस किताबहरू छन् जुन सँधै अप टु डेट हुन्छ र तपाईसँग भएको अर्को चीज तपाईसँग साइको टेक्निकल भाग पार गर्न सक्षम हुनु पर्छ। केहीसँग अभ्यास गर्न नबिर्सनुहोस् नक्कली परीक्षा, साथै सामग्रीका अन्य प्रकारहरू जुन तपाईंलाई बहु विकल्प परीक्षाको लागि तयारी गर्न मद्दत गर्दछ। पृथक वा सँगै, तिनीहरू उत्तम विकल्प हुनेछ बैटरीहरू राख्नको लागि तपाईंको स्थान प्राप्त गर्न सक्षम हुन।
Correos मा कामका फाइदाहरू
Correos मा काम गर्ने को धेरै फाइदाहरु छन्। यो विपक्ष हो जुन प्रान्तहरूले प्रस्ताव गरेको हो। त्यसकारण, तपाइँ तपाइँको छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, साथसाथै प्लेस गर्ने स्थिति पनि। उसको तलब एकदम उपयुक्त छ कि यो पनि खाता मा लिन को लागी अर्को फाइदाहरु हो। देखि, सबैभन्दा कम १००० युरो भन्दा बढीमा जान्छ।
कामका लागि कार्यतालिका पनि महत्त्वपूर्ण जब उनीहरूलाई ध्यानमा राख्छन्। पूर्ण वा आंशिक समय भएको। दुबैका लागि त्यहाँ सँधै स्थानहरू उपलब्ध छन्। थप रूपमा, हामीले सोच्नु पर्छ कि हामी एउटाको सामना गर्दैछौं निश्चित काम र जीवनको लागि, यी सबै समावेश गर्दछ। यदि तपाइँ देखाउनुहोस् तर तपाइँको ठाउँ प्राप्त गर्नुभएन भने, तपाइँसँग अर्को विकल्प छ। तपाईं हुलाक कार्यालय रोजगार बैंक प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं समयमै कार्य गर्नुहुनेछ, तर यो सत्य हो कि यो गुणको अंशमा गणना हुनेछ।